Google wepu nhọrọ iji gbanyụọ ọrụ Ikanam nke akwu ese foto | Gam akporosis
Google wepu nhọrọ iji gbanyụọ ọrụ ikanam nke igwe akwu
Onye ọ bụla nke nwere igwefoto nche ma ọ bụ kamera n'ụlọ ma ọ bụ ebe ọrụ ya, dabere na ihe nlereanya ahụ, maara na ọtụtụ nwere ọkụ na-egosi mgbe ọ na-arụ ọrụ, ikanam anyị nwere ike kwụsị ọrụ ka anyị ghara inye ndị enyi anyị ihe anyị na-amaghị ma ọ bụ n’ihi na ọ na-akpasu anyị iwe.
Akwụ bụ akara Google nke raara onwe ya nye ịme ngwaọrụ smart maka ụlọ na ebe anyị nwere ike ịchọta site na thermostats gaa na ese foto nchekwa. Igwefoto nchekwa ahụ nwere nsogbu nchekwa yana nke ndị ọrụ ochie gara n'ihu ịnweta ya, n'agbanyeghị na ejikọtaghị ya na akaụntụ ha. Ugbu a nsogbu bụ ọzọ.
Na Mee, Google kwuputara nkwa nzuzo ya nke nnukwu ọchụchọ ahụ kwere nkwa ihe ngosi anya mgbe "igwe onyonyo akwụ akwụ gị na-arụ ma na-ezigara akwu vidiyo na ọdịyo." Google amalitela iziga ndị ahịa ya ozi email na-agwa ha banyere mgbanwe ndị amalitela itinye na awa ole na ole gara aga.
Mgbe igwefoto gbanyere ma zipụ vidiyo na ọdịyo na sava Google (nke mere na onye ọrụ nwere ike ịnweta ha nke ọma), anyị ga-enye gị akara ngosi. All akwu ese foto, akwu Ndewo, na Dropcam ngwaọrụ ga na ọnọdụ ìhè on mgbe igwefoto na-arụ ọrụ iji jide n'aka na gị na ndị gbara gị gburugburu maara mgbe igwefoto dị na ndekọ.
N'ihi ya, anya, niile akwu igwefoto ụdị nwere nhọrọ iji gbanyụọ ọrụ nke ọnọdụ a. Ugbu a, ị nwere ike belata nchapụta nke oriọna a ka ọ gafere ntakịrị karịa. Dị ka a tụrụ anya ya, ndị ọrụ nke ngwaahịa ya egosipụtala obi erughị ala ha na netwọkụ mmekọrịta, na-ekwupụta na mkpebi a dị n'otu na-enye ndị ọrụ nchekwa ahụ, n'ihi nsonaazụ mgbochi ha, abaghị uru na nnukwu ụlọ ọrụ na-enye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google wepu nhọrọ iji gbanyụọ ọrụ ikanam nke igwe akwu
Nokia 7.2 pụtara ọzọ site na onyonyo ya